Booliska Brazil Oo Xabsiga Dhigay Qofkii Sagaalaad Ee Lala Xidhiidhinayo Cayaartoygii Qoorta Iyo Xubinta Taranka Laga Jaray Iyo Faahfaahin Kale Oo Soo Baxday | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Booliska Brazil Oo Xabsiga Dhigay Qofkii Sagaalaad Ee Lala Xidhiidhinayo Cayaartoygii Qoorta Iyo Xubinta Taranka Laga Jaray Iyo Faahfaahin Kale Oo Soo Baxday
(18-11-2018) Ciidamada booliska Brazil ayaa soo xidhay qof kale oo lala xidhiidhinayo inuu lug ku lahaa dilkii foosha xumaa ee loo geystay ciyaartoy u dhashay dalkaas oo lagu magacaabi jiray Daniel Correa oo laga helay duurka iyadoo qoorta iyo xubinta taranka laga gooyey.
Sida ay ku warrantay warbaahinta Brazil, Eduardio Purkote oo ay da’diisu tahay 18 jir ayaa ayey boolisku soo qabteen, waxaana looga shakisan yahay inuu yahay qofkii ku jabiyey albaabka qolka hurdada ee ay ku jireen Correa iyo Cristiana Brittes oo ah xaaska ninka loo tuhunsan yahay dilka ee Edison Brittes, ka hor intii aan sida xun loo dilin ciyaartoyga.
Purkote ayaa waxa kale oo la sheegay inuu yahay qofkii Edison Brittes u keenay mindii uu xubinta taranka kaga gooyey Daniel Correa oo markii dambena qoorta laga jaray ka hor intii aan meydkiisa dibedda looga saarin magaalada Sao Paulo.
Macluumaad kale oo booliska laga helay ayaa waxay sheegayaan in eedaysanaha dembiga dilka loo haysto ee Brittes oo ah ganacsade la tuhunsan yahay inuu ka tirsan yahay dadka ka ganacsada daroogada, sababtuna waa in gurigiisa laga helay mooto ama dhugdhuglay uu ku diiwaangashan yahay Celso Alexandre Pacheco Quevedo oo 12 dembi oo kala duwan lagu helay, kuna jira xabsi ku yaalla dalkaas, kaas oo ka mid ah dadka ka ganacsada daroogada.
Warku wuxuu intaa ku daray in boolisku fureen baadhitaan cusub oo ay ku samaynayaan Edison Brittes iyo xidhiidhka ka dhexeeya Quevedo.